ရှင်ကျန်းဒေသက လူ့အခွင့်အရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်းဆုံး ၅ နှစ်ကို ရရှိခံစား - Xinhua News Agency
ရှင်ကျန်းဒေသက လူ့အခွင့်အရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်းဆုံး ၅ နှစ်ကို ရရှိခံစား
ပေကျင်း ၊ ဇွန် ၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ရှင်းကျန်းဝေဂါ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၌ လူ့အခွင့်အရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပြီးခဲ့သော ငါးနှစ်တွင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက မေ ၃၁ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ရှင်းကျန်းဒေသ၌ ပြည်သူများ၏ လူနေမှုအခြေအနေသည် သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးတွင် ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတော်ကောင်စီပြန်ကြားရေးရုံး၏ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သူ Li Xiaojun က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ရှင်းကျန်းဒေသသည် လူ့အခွင့်အရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ကြီးမားသောတိုးတက်မှုများ ရရှိခဲ့ရာ အချို့နိုင်ငံများ၏ လက်ညှိးထိုးပြောဆိုမှုသည် လေထဲတွင်သာပျောက်ကွယ်သွားကြောင်း Li က ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများသည် စီးပွားရေး နှင့် လူမူရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု ၊ ယဉ်ကျေးမှု ၊ ပညာရေး ၊ ဘာသာရေးယုံကြည်မှု လွတ်လပ်ခွင့်အား အကာကွယ်ပေးခြင်း နှင့် အခြားကဏ္ဍမျိုးစုံတွင် မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များအတွင်း အကောင်းဆုံးနှစ်များအဖြစ် ရရှိခံစားခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
#China #Xinjiang #humanright #development #တရုတ်နိုင်ငံ #ရှင်းကျန်း #လူ့အခွင့်အရေး #ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု #ဆင်ဟွာ #xinhua #Myanmar #xinhuamyanmar
BEIJING, May 31 (Xinhua) — The past five years have been the best for the development of human rights in China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region,aChinese official said Monday.
People’s living conditions have improved remarkably and great achievements have been made in the fight against poverty in Xinjiang, Li Xiaojun, an official with the State Council Information Office, toldapress conference.
Xinjiang has achieved great progress in human rights development, and finger-pointing by some countries is purely out of thin air, Li said.
China’s ethnic minorities have enjoyed the best years in recent decades in terms of economic and social development, ethnic unity, culture, education, protection of freedom of religious belief and many other aspects. ■
လွန်ခဲ့သော နှစ် ၁၀၀ ကျော်က အစုပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုတွင် မြို့တော်အစိုးရ၏အခန်းကဏ္ဍအတွက် အမေရိကန်မြို့တော်ဝန်တောင်းပန်
တရုတ်နိုင်ငံအနှံ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ ၆၄၀ သန်းနီးပါး ထိုးနှံပေးထား